ရွှေတြိဂံ မူးယစ်ရာဇာ စိုင်းနော်ခမ်းအား တရုတ်ပြည်သို့ ပို့ဆောင် – Laos sends accused drug lord to China over Mekong killings | MoeMaKa Burmese News & Media
ရွှေတြိဂံ မူးယစ်ရာဇာ စိုင်းနော်ခမ်းအား တရုတ်ပြည်သို့ ပို့ဆောင် – Laos sends accused drug lord to China over Mekong killings
မေ ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၂
ယနေ့ ရုပ်သံသတင်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု တစ်ခုတွင် တွေ့ရသော စိုင်းနော်ခမ်း
3 Responses to ရွှေတြိဂံ မူးယစ်ရာဇာ စိုင်းနော်ခမ်းအား တရုတ်ပြည်သို့ ပို့ဆောင် – Laos sends accused drug lord to China over Mekong killings
MK on May 11, 2012 at 12:42 pm
ရှမ်း လူ မျိုး ကို ဘာ ကြောင့် တ ရုတ် လွဲ တာ ကြည့် နေ ရ သ လဲ …မြန် မာ ကို ပဲ လွဲ ရ မှာ ပေါ့ ။ လာ အို ကို မြန် မာ က ကူ ညီ တာ ဖြတ် ပါ ။
saw on May 11, 2012 at 3:57 pm
blueberry on May 11, 2012 at 4:34 pm
Yes!!! definitely … Why on earthaShan- born , Myanmar national has been transferred to the Chinese Authority ? … Where are International Conventions ? … International Humanitarian Law ? …. NO Human Rights ? …